ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာဘာလဲ။ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
လူအများစုကသူတို့၏ဘ ၀ တစ်ခု၏တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်မကကိုမကျေနပ်ကြပါ။ ကိစ္စများစွာတွင်၎င်းသည်အလုပ်လေယာဉ်အကြောင်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာမဟုတ်သောကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ အခြားဖြစ်ရပ်များတွင်၎င်းသည်မကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးနှင့်အောင်မြင်သောနှင့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ရန်အခက်အခဲနှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည်။ အခြားလူများအတွက် ယေဘူယျအားဖြင့်ပိုကောင်းတဲ့မိဘ၊ ပိုကောင်းတဲ့မိဘ၊ အလုပ်မှာပိုကောင်းတာပေါ့အားကစားတွင်သော်လည်းကောင်း၊ နေ့စဉ်ဘဝကဏ္anyများတွင်ပါပါ ၀ င်သည်။
သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုမနှစ်သက်သောအရာများသည်ပြောင်းလဲလိုသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှုထောင့်များနှင့်ဆက်နွယ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဖြစ်မှန်မှာ၊ အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းသည်တစ်ခုချင်းစီ၏လက်၌ရှိသည်။ ကံမကောင်းပါ၊ အခြားသူများအပေါ်တွင်အချို့သောအလင်းကိုထွန်းလင်းစေသည့်မင်္ဂလာရှိသောလက်မရှိပါ။ အလုပ်, အားထုတ်မှု, ဇွဲ, အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေရေးနှင့်သူတို့သူတို့ကိုယ်သူတို့တင်ပြသည့်အခါသူတို့ကိုကြည့်ရှုနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
အကယ်စင်စစ်သင်သည်တစ်ကြိမ်ထက်မကအပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသင့်ကိုယ်သင်ပြောနေသည်ကိုတွေ့ခဲ့ရသည်။ တိုးတက်စေရန်, အဆိုးမြင်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ကိုအချိန်ဆွဲနေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးသင့်ဘဝနှင့်ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားမှုများကိုမေ့ပျောက်ရန် ထိုကတိတော်များအားလုံးသည်မကြာခဏမေ့သွားတတ်ကြသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်မည်မျှပင်ကောင်းမွန်စွာရည်ရွယ်ထားပါစေ၊ တစ်ခုခုပြုလုပ်ရန်၊ ပြောင်းလဲရန်၊ တိုးတက်ရန်ကြိုးစားရန်မလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပါဝင်သည်အတိအကျအရာဖြစ်တယ်, လူ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသွင်ပြောင်း ဒါမှမဟုတ်သင်ကခေါ်ချင်သမျှ။ မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုကွဲပြားသောအပြုအမူမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အတွေးအမြင်အသစ်များနှင့်အတွေးအခေါ်သစ်များကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးသည့်ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသာယာဝပြောမှုရရှိရန်သင်၏အဆင့်ကိုပြောင်းလဲခြင်းဟူသောစိတ်ကူးကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဘဝအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားဖြင့်သင်ညီညွတ်မှုသို့ ဦး တည်စေသောအတွေးများနှင့်သဘောထားများကိုပြောင်းလဲနိုင်သည် အကြံဥာဏ်သစ်များရယူခြင်းကသင့်အားကူညီလိမ့်မည် ထိုကဲ့သို့သောကုန်ထုတ်စွမ်းအား, ခေါင်းဆောင်မှုကျွမ်းကျင်မှုအဖြစ်ရှုထောင့်တိုးတက်စေ သင်၏ကဏ္ quality အားလုံးတွင်သင်၏ဘဝအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုမည့်ကျွမ်းကျင်မှုအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာမင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေကိုပြည့်မီအောင်လုပ်ပြီးမင်းရဲ့အိပ်မက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်မယ်ဆိုရင်ပန်းတိုင်အသစ်တွေ၊
သို့သော်လမ်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်မလွယ်ကူပါ ၎င်းသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ရမည့်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ဘ ၀ ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေမည့်စွမ်းရည်များနှင့်သဘောထားများကိုရယူခြင်းအားတစ်ညလုံးမရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပျင်းရိခြင်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်မိမိလေးစားမှုကင်းမဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်စည်းကမ်းမပါဘဲပြောင်းလဲခြင်းကိုမဖြစ်နိုင်ပါ။ အထက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သင့်အားခွင့်ပြုမည့်အပြောင်းအလဲအသစ်များကိုဤအရာအားလုံးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။
ဤကဏ္တွင်သင်၏မေးခွန်းများစွာအတွက်အဖြေများကိုရှာဖွေမည့်ဆောင်းပါးအမျိုးမျိုးမှတစ်ဆင့်သင်၏ပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းကိုရှာတွေ့နိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာသင်သံသယမထားနိုင်ဘူး အဲဒီသံသယများပြင်းထန်မှုလျှော့ချတက်အဆုံးသတ်သောသူများဖြစ်ကြသည်တိုးတက်စေရန်အလိုဆန္ဒ။ ဘဝသည်အပြောင်းအလဲများနှင့်အသွင်ပြောင်းမှုများနှင့်ပြည့်နေသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူကိုယ်တိုင်သာစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
သို့သော်သင်တစ် ဦး တည်းလုပ်ရန်လိုသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်မည်သည့်နေရာတွင်စရမည်၊ သို့မဟုတ်မည်သည့်အတိုင်းလိုက်နာရမည်ကိုသင်မသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤစာမျက်နှာများရှိအသက်တာ၏မသိသောအရာများကိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုလိမ့်မည်။ သင်၏အသွင်ပြောင်းမှုနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းသည်ထိရောက်မှုရှိ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာအပြောင်းအလဲကိုဖန်တီးတာလောက်ပဲမဟုတ်ဘူး၊ ဘဝပုံစံအသစ်တစ်ခုဖြစ်လာသည့်အလေ့အထကိုဖန်တီးပါပိုမိုပျော်စရာကောင်းသော၊ ပို၍ ပျော်ရွှင်သော၊
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ဖို့ စည်းစနစ်တကျရှိဖို့က မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်... သင်ဟာ အလျင်လိုနေပြီး အမြဲလိုလို ခံစားချက်တွေနဲ့ ရှင်သန်နေမယ်ဆိုရင်...
ပါးစပ်နဲ့ တင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ ဗိုက်ထဲမှာ ကမောက်ကမတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်…
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း .
ခိုင်လုံမှုအကြောင်းပြောတဲ့အခါ လူတွေရဲ့ဆန္ဒ၊ လိုအပ်ချက်တွေ ဒါမှမဟုတ် အတွေးအမြင်တွေကို ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရေးစတိုင်များ - အရေးကြီးဆုံး4ကိုသိပါ။
လူတွေက အဆက်မပြတ် ဆက်သွယ်နေပြီး အဲဒါကို သတိမထားမိဘဲ၊ ကျွန်တော်တို့ကို လွှမ်းမိုးထားတဲ့ ကွဲပြားတဲ့ ဆက်သွယ်မှုပုံစံတွေရှိတယ်၊ ငါတို့ မင်းကို စကားပြောမယ်...
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့4လအတွင်း .
သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်နစ်နာစေလိုခြင်းမရှိဘဲ ကန့်သတ်ချက်များကို မသတ်မှတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ ငြင်းဆန်မှုကို အချို့သောသူများရှေ့တွင်သာ ပြသရမည်ကို သိရှိခြင်း...
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်း .
စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လူတွေရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သုခချမ်းသာကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင် တားဆီးဖို့ အပန်းဖြေဖို့ သင်ယူခြင်းဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။
မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှုအပေါ် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်း .
ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဖိုးထားတတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ။ ယေဘူယျအားဖြင့် လူတွေရဲ့ ကြီးကျယ်တဲ့ ပြဿနာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားမှု မရှိခြင်းပါပဲ။ တစ်ခုခု...
ကောင်းသောနိဒါန်းဖြင့် စာသားတစ်ခုစတင်ခြင်းသည် စာဖတ်သူ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါမှမရှုံးဘူး...
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့7လအတွင်း .
သင့်ရှေ့တွင် လူတစ်ဦးရှိခြင်းနှင့် စကားစမြည်မပြောခြင်းသည် အရှုပ်ထွေးဆုံးနှင့် အခက်ခဲဆုံးခံစားမှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ မင်းနားလည်ဖို့အချက် ၇ ချက်
အနှုတ်လက္ခဏာနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောစရိုက်လက္ခဏာ ၃၈ မျိုးစာရင်း
ပိုမိုကောင်းသော (နှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်) လေ့လာရန်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြချက်လှည့်ကွက် 32
လူတစ် ဦး ၏အားနည်းချက် ၁၅ ခု
Galileo Galilei ၏ပံ့ပိုးမှုများကဘာလဲ။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းလမ်းကဘာလဲ? ဝိသေသလက္ခဏာများ, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ, ခွဲခြားနှင့်ပိုပြီး
nonpolar covalent bond ၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဘာတွေလဲ? အဓိပ္ပါယ်, ပုံပြင်များနှင့်ဥပမာ
၁၃ လူငယ်များအတွက်ကစားနည်းများ (ဂိမ်းများနှင့်)
အဆိုပါ synoptic စားပွဲပေါ်မှာ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို
ပင်ကိုယ်မူလဖြေရှင်းချက်တွေကဘာတွေလဲ။ အမျိုးအစားများ, Properties ကိုနှင့်ဥပမာ
Shared Development ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ပန်းတိုင်များ၊
Lamarck ရဲ့ Transformism သီအိုရီကဘာလဲ။
Monographic စာသား: ဝိသေသလက္ခဏာများ, အမျိုးအစားများ, လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အဆောက်အ ဦ များ